Maitiro ekudzima otomatiki zvigadziriso pane yako Apple Watch | Ndinobva mac
Imwe yesarudzo yatinayo mumamiriro eApple Watch yedu ndeyekuti maitirwo acho haaitwe otomatiki. Iyi sarudzo iyo ingaite senge yakaoma kubata nekuda kwekukanganwa kukanganwa kwekumisikidzwa kweshanduro itsva dzeWatchOS, asi inobatsira chaizvo kune avo vanoda kuisa maapditions avo pese pavanoda chero bedzi isu tichiziva zvishoma nezvekuuya kweshanduro nyowani.
Izvi zvinoreva kuti haufanire kunge uri "geek" sesu anoverenga Apple uye tekinoroji nhau mazuva ese, asi iwe unofanirwa kuziva nezvazvo kuti uzive nguva yekuvandudza yako Apple Watch. Chaizvoizvo izvi zvidzoreso kusvika parutivi neiyo iPhone uye iPad kazhinji, saka isu tinongofanirwa kusarudza kana tichida kuti iiswe pane yedu Apple Watch.
Tinogona kutaura kuti matanho ari nyore uye hapana matambudziko akawandisa ekudzima izvi otomatiki zvigadziriso muWOSOS. Kune izvi isu tinongofanira kudaroPinda iyo yeWatch app, pinda General, pinda Software Kwidziridzo uye deactivate iyo Yega Yekuvandudza sarudzo izvo zvinouya zvakagadziriswa kubva kuKutanga.
Nenzira iyi, kana wachi ichi ine vhezheni itsva, haizoiise pane yedu Apple Watch husiku yakambotorwa. Tichafanirwa kukumanikidza iwe kuisa iyo nyowani vhezheni chero bedzi isu tiine wachi yekuchaja uye yakabatana kune yedu yeWi-Fi network. Huya, zvakangofanana asi isu tichava mukutungamira kwekusarudza kana tichida kuti vhezheni itsva yeWatchOS iiswe pane yedu Apple Watch.
Izvi hazvireve kuti hatidi kuvandudza, zvakati wandei, iko kungosarudza iyo nguva yatiri kuda kuisa iyo nyowani vhezheni. Isu tinogara tichikurudzira kumutsiridza kana vhezheni itsva yeWatchOS yaonekwa kuwana chengetedzo uye mashandiro ekuvandudza ayo Apple anowedzera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Maitiro ekudzima otomatiki zvigadziriso pane yako Apple Watch
Morgan Stanley anoti Apple Car ndiye chete anokwikwidza naTesla